TTSweet: Japanese Golden Curry ...
မဆွိတီ စလုံးမှာ အလုပ်လုပ်တုံးက နေ့ခင်းဖက်ကို အပြင်ထွက်စားခဲပါတယ်။ လူက အမြဲ ၀ိတ်ချနေရတာရော၊ အလုပ်များတာရော နေ့ခင်းဖက် အလုပ်လေးဆက်လုပ်ရင်းနဲ့ အိမ်ကယူလာတဲ့ အသီးဗူးလေး ဖွင့်စားလိုက်တာပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ ထွက်ပြီဆိုလဲ ဘေးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ တပျော်ကြီးသွားကြတာ။ အများအားဖြင့်တော့ NUS ထဲသွားကြတယ်။ သူတို့အဖို့ရာတော့ ရုံး ဘေးနားက ဆိုင်တွေကလဲ နေ့စဉ် စားရလွန်းလို့ ငြီးငွေ့ကြပြီကိုး။ NUS ထဲ သွားတာတောင် ကန်တင်း မထပ်အောင်သွားကြတာ။ ဒီနေ့ science canteen ဆို နောက်နေ့ engineering ၊ နောက်နေ့ Medical နောက်နေကျ အဆောင် ကင်တင်း အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေဆိုတော့ ကိစ္စမရှိပေမဲ့ သူတို့က ဒီလောက်ရွေးစရာတွေများတာကို ငြီးငွေ့ကြတယ်ဆိုပဲ။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ခါသားတော့ ရုံးထိပ်နားမှာ ဂျပန်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လာဖွင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ ၀မ်းသားအားရ ဆိုင်အသစ်ဆီ သွားကြတာပေါ့။ ကိုယ်ကလဲ ဂျပန်စာကြိုက်တော့ ဆိုင်အသစ်ဆို စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ လိုက်သွားတာ။ ဟမ်မလေး ဆိုင်လဲရောက်ရောဗျာ၊ တန်းစီနေတဲ့ လူတန်းက ဆိုင်တံခါး အပြင်ထိတောင် ထွက်နေတာ အရှည်ကြီးပဲ။ လူတွေကလဲ ဆာနေပြီဆိုတော့ တခြားနေရာသွားကြမလားဆို လာပြီးမှမထူးဘူးဆို အကုန် ၀င်တန်းစီကြတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ တန်းစီရတာလဲ နာရီဝက်လောက်ကြာတယ်ထင်တာပဲ။
ကိုယ့်အလှည့်လည်းရောက်ရော ကိုယ်စားချင်တဲ့ ဆယ်လ်မွန်က မရှိတော့ဘူးတဲ့။ အဲမှာကျန်တဲ့ golden curry ဆိုတာပဲ မှာစားရတော့တယ်။ တခြားသူတွေလဲ ဒီလိုပဲ။ သူတို့ကတော့ golden curry ကြိုက်ပါတယ်၊ ကောင်းပါတယ် ပြောကြတယ်။ ကိုယ်ကတော့ မစားဖူးတော့ ဘာမှန်း မသိဘူးပေါ့။ နောက်ဟင်းရလာတော့ ဟင်းအနံ့က တော်တော်မွှေးသဗျ။ မဆလာတစ်မျိုး အနံ့ပဲ။ ကုလားဟင်းနံ့လိုခပ်ဆင်ဆင်။ အာလူးလေးတွေ၊ မုံလာဥနီလေးတွေနဲ့ ၀က်သားအတုံးလေးတွေကို အနှစ်များများနဲ့ ချက်ပြီး ထမင်းပေါ်က ဆမ်းပေးလိုက်တာပဲ။ ဟင်းအနံ့ကလဲမွှေး၊ ဗိုက်ကလဲဆာနဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးစားကြတာ ခေါင်းတောင် မဖော်နိူင်ကြဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီအချိန်တုံးက မဆွိတီတို့ Group မှာ လူသိပ်စုံတဲ့ အချိန်။ ၈ ယောက် -၉ယောက်လောက်များရှိမလား တစ်ဖွဲ့ကြီးပဲ။ (နောက်ပိုင်းတော့ ဌာနမှာလူလျှော့ရင်း ၄ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်) အဲဒီတော့ လူစုံတက်စုံနဲ့ ဆင်တူစားခဲ့ရတဲ့ အဲဒီ golden curry ကို ချက်တိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဟောင်းတွေကို အလွန်ပဲ သတိရပါသဗျာ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကြ၊ နောက်ကြ၊ ဟာသတွေ ပြောကြ၊ ရုံးအကြောင်း၊ ဘော့စ်အကြောင်း အတင်းတွေပြောကြနဲ့ အဲဒီအချိန်တွေကိုလဲ ပြန်လွမ်းမိပါရဲ့။
အန်တီဆွိရဲ့ old colleagues တွေနဲ့ တစ်ခါတုံးက D&D မှာ
နောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီဟင်းကို ကြိုက်တာနဲ့ အဲဒီဆိုင်လေးရောက်တိုင်း မကြာခဏစားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်မှာ ရောင်းတဲ့ ဟင်းဆိုတော့ ဟင်းထဲမှာပါတဲ့ အသားဟာ အင်မတန်နည်းတယ်။ အာလူးတွေ မုံလာဥနီတွေချည်းပဲဆိုတော့ ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လှ အိမ်မှာအသားများများနဲ့ ချက်စားကြည်ဦးမယ်ဆို စိတ်ကူးနေတာကြာပြီ။ အိမ်ကလူတွေလဲ စားရအောင်ပေါ့။ နောက်တော့ အဲဒီ Golden curry အနှစ်ခဲလေးတွေကို giant ကနေ၀ယ်လို့ရလို့ အိမ်မှာစမ်းချက်ကြည့်တာမှာ ဦးခြိမ့်ကလဲ အဲဒီဟင်းကို အနံ့မွှေးလွန်းလို့ဆို တော်တော်လေးကို အားပေးတယ်။ ခုဒီရောက်တော့လဲ တစ်ခါတစ်လေ ဟင်းချက်ရတာ ဘာချက်ရမှန်းလည်းမသိ၊ ဗမာဟင်း၊ တရုတ်ဟင်းငြီးငွေ့ပြီဆို အဲဒီ ဂျပန်ရွှေရောင် အနှစ်ဟင်းကို ချက်စားဖြစ်ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း သမီးကလဲ အဲဒီဟင်းကျ ကြိုက်သဗျား။
အန်တီဆွိရဲ့ ဘလော့ဂ်ပိတ်သတ်တွေလဲ အိမ်မှာ တခြားဟင်းတွေ ငြီးပြီဆို ချက်စားရအောင် ဟင်း ချက်နည်းလေး ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ချက်ရတာလဲ လွယ်တယ်။ စားလို့လဲကောင်းပါတယ်။ တစ်ခါလောက် စမ်းချက်ကြည့်ကြပါဦး။
လူ၅ယောက်စာခန့် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက
၀က်သား အသားချည်း (သို့) အဆီနည်းတဲ့ အပိုင်း ၄၀၀ ဂရမ်ခန့် (bite size လေးတွေ လှီးပြီး ကြက်သားမှုန့် ပဲငံပြာရည် အကြည်ရည်နှင့် နယ်ထားပါ။)
အာလူး အလုံးသေး ၃လုံးခန့် bite size လေးတွေ လှီးထားပါ။
မုံလာဥနီ အကြီးတစ်ခုကိုလဲ bite size လေးတွေ လှီးထားပါ။
ကြက်သွန်နီ ဥကြီး တစ်ဥ bite size လေးတွေပဲ chop လုပ်ထားပါ။
ကြက်သွန်နီ ဥ တစ်ဝက်ခန့်ကို ပါးပါးသေးသေးလေးတွေ chop လုပ်ထားပါ။ (ဆီသတ်ရန်)
ကြက်သွန်ဖြူ ဥ ၅မွှာခန့် ညက်နေအောင်ထောင်းထားပါ။ (ဆီသတ်ရန်)
Golden curry အနှစ်ခဲ ၅ ခဲခန့် (လူတစ်ယောက်စာ တစ်ခဲခန့် တွက်လို့ရပါတယ်)
ဆီ စားပွဲဇွန်း ၃ဇွန်းခန့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒန်အိုး ဇောက်နက်နက်ထဲကို ဆီထည့်ပါ။
ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူထည့်ပြီး မွှေးလာအောင် မွှေပေးပါ။ ရွှေဝါရောင်သန်းလာလျှင် ၀က်သားနယ်ထားတာလေးတွေ ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။
၀က်သားအရည်ကုန်လျှင် ၀က်သားနူးသည်အထိ ရေထပ်ထည့်ပြီး မီးအေးအေးနှင့် အဖုံးအုပ်ပြီး တည်ထားပါ။ ၀က်သားက အတုံးသေးလေးတွေဆိုတော့ ၁၅မိနစ်လောက်ဆို ရပါပြီ။
၀က်သားနူးရင် အာလူးနဲ့ မုံလာဥနီတွေကို ထည့် ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး နူးအောင်ထပ်တည်ပါတယ်။
အာလူး၊ ၀က်သားနဲ့ မုန်လာဥနီတွေ အားလုံးနူးပြီဆိုရင် ရေနွေး တစ်ခွက်ခန့် ဟင်းအိုးထဲထည့်၊ ကြက်သွန်နီ လှီးထားတာလေးတွေလဲ ထည့်၊ Golden curry အနှစ်ခဲလေးတွေပါ ပစ်ပြီး မွှေပေးရပါတယ်။
အနှစ်တွေ ပျစ်ခဲလာရင်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အပျစ်အကျဲ လိုသလောက်အတွက် ရေနွေးလိုသလောက်ထပ်ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။ အန်တီဆွိအကြိုက်ဆို ရေတော်တော်များများ ထည့်ရပါတယ်။ အနှစ်တွေ ဆူပွက်လာပြီဆို ချလို့ရပါပြီ။
အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ Golden curry ရပါပြီခင်ဗျား။
ဂျပန်ဟင်းနဲ့ လိုက်အောင် မီဆို soup လေးပါ ပြင်ဆင်ပါတယ်။
ထမင်းပူပူလေးပေါ် golden curry အနှစ်လေးဆမ်းစား၊ မီဆို soup လေးနဲ့ အင်မတန် လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ဆိုလဲ ကောင်းတာပဲ။
Posted by T T Sweet at 1:02 PM
Labels: (၈ ၀၀) ကိုးရီးယားစာ- ဂျပန်စာ, (၈- ၃) Japanese Golden Curry
အမဲသားကြိတ်သား ၂ ကပ်၊ ဝက်သားကြိတ်သား ၁ကပ် ကိုပေါင်း hambagu (ဂျပန်အခေါ်) လေးလုပ်ပြီး curry အနှစ်လေးနဲ့ဆမ်းစားလဲကောင်းတာပဲ hambagu curry ပေါ့။ Miso ကတော့ တိုဖူးတုံးလေးတွေလှီးထည့်ပြီး ခရုသေးသေးလေးတွေပါ ထည့်ရင် ကောင်းဆုံး။ ကိုယ့်အကြိုက်လေးတွေ ရေးမိလိုက်တာပါ။
်မမိုး October 15, 2012 at 5:46 PM
လုပ်စားကြည့်ချင်တယ်...Golden curry အနှစ်တော့ ရမရ မသိဘူးကွယ်။ တခါမှတော့ ဆိုင်တွေမှာ
မမြင်မိဘူး။ ဂျပန်ဆိုင် တဆိုင်တွေ့ထားတယ်..သွားမေးပြီး ၀ယ်ကြည့်ဦးမယ် တီဆွိရေ....
တံဆိပ်တော့ မမှတ်တော့ဘူး..အဲဒီလို ဗူးနဲ့ curry အတုံးပဲ..
ပါဝင်ပစ္စည်းကို ဖတ်ကြည့်တော့ MSG ပါလို့ အသာ ပြန် ထားခဲ့တယ်..
Iora October 16, 2012 at 5:41 AM
ကုိုယ်လည်းအဲဒီဟင်းကြိုက်တယ်။ ကုလားဟင်းနဲ့ တူတယ်နော်။
အနှစ်တွေအများကြီးနဲ့ ဆုိုတော့ကုိုယ့်ချစ်ချစ်ကြီးလည်းကြိုက်ပါ့။း)
moewar October 16, 2012 at 7:51 PM
မွန်မွန်ယိုကို October 17, 2012 at 3:14 AM
ဂျပန်တွေထဲက တော်တော်များများက သူတုို.အခေါ် ခါရေး ကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ တစ်ချို.မကြိုက်တဲ. ဂျပန်တွေလဲရှိသေးတယ်။
ညီမတုို.လဲ မြန်မာလျှာနဲ.လိုက်တော. ခါရေးကို အစပ်အနေတော်နဲ.အရသာကို ဝယ်ပီး ကိုယ်.ဘာသာချက်စားဖြစ်တယ်။
တီဆွိကတော်တယ်ဗျာ။ ချက်ပီးသကာလ ဟင်းပုံကိုကြည်.ပီး ဂျပန်လက်ရာမှီပါသောကြောင်. ချီးမွန်းခန်းဖွင်.သွားပါတယ် :)
San San Htun October 17, 2012 at 2:15 PM
မစားဖူးသေးဘူး..ကောင်းမယ့်ပုံပဲ..လွယ်လည်းလွယ်တယ်..ချက်စားဖို့တမယ်တိုးပြီ..
ကြိုက်လို. ၀ယ်ဝယ်စား ဖြစ်တယ်...အိမ်မှာ စမ်းလိုက်အုံးမယ်...thanks for sharing..ဒံပေါက်ချက်နည်းလေး လုပ်ပါအုံး..
တီဆွိ..ဒီပို့စကို ခုမှပြန်ဖတ်လို့ ....
တီဆွိစ် ဂျပန်နည်းက ထောပ်တကို အရင်ထည့်ပီး ကြက်သွန်နီ နူးလာတဲ့အထိတည်ပါတယ်။
က်ြသွန်နီများများထည့်ပါတယ်။ ပီးမှ မုန်လာဥနီနဲ့ အာလူးတွေထည့်ပါတယ်။ ပီးတော့ မှ အသားထည့်ပီး အရသာအတုံးကိုထည့်ပီး ပစ်ထာဒလိုက်ပါတယ်။ မီးနဲနဲနဲံ အဖုံးအုပ်ပီး..
.မွှေပေးပီး ရေထည့်တာပါ။ ။ မီးနဲပါမှ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဂျပန်အမေက ကျနော်ကြိုက်တတ်လို့ သင်ပေးခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ။
အပေါ်က စာမပီးပဲ တင်လိုမိလို့ ဆက်ရေးလိုက်တာပါ။
T T Sweet December 17, 2012 at 10:38 PM
ကျေးဇူးပဲနော် ... ပြင်ပေးတဲ့အတွက်။ ဂျပန်အမေဆိုတော့ ဒါမျိူးချက်တာ ပိုသိမှာပေါ့။ တီဆွိကတော့ အင်တာနက်ထဲ ဟိုဖတ်ဒီဖတ်နဲ့ စမ်းချက်ရတာ။